वर्षा र राजको ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ —
वर्षा र राजको ‘म यस्तो गीत गाउँछु’
११ भाद्र २०७८, शुक्रबार १४:३० admin
काठमाण्डौं । गायक सुगम पोखरेल र गायिका सुष्मा विश्वकर्माको स्वरमा समावेश ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । यो गीतमा सत्यराज चौलागाँइको शब्द, सरोज प्याकुरेलको संगीत छ । गीतलाई उदयराज पौडेलले एरेन्ज गरेका हुन् ।
यो गीतको भिडियोमा कलाकार राज कटुवाल र नायिका वर्षा सिवाकोटीले मोडलिङ गरेका छन् । गीतले एक यूवक र एक यूवतीविचको प्रेम र वाचाको कथा भन्छ ।
भिडियोमा केही महिनादेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका राज र वर्षाको अभिनयले पनि अझै सुन्दरता थपेको छ । यो गीतको भिडियोेलाई रामजी लामिछानेले कोरियोग्राफी तथा निर्देशन गरेका हुन् ।
भिडियोमा सौरभ लामाकोे छायांकन, अर्जुन जीसीको सम्पादन छ । लामिछानेले भिडियोमा वर्षा र राजलाई रोमान्टिक शैैलीमा प्रस्तुत गरेका छन् । गीत जस्तैै भिडियोे पनि फिल्मी लाग्छ ।
भिडियोमा रेनिश फागोको कलर, सुरेश काफ्लेको ड्रोन, सरोेज पाण्डे र हरि काव्या थापाको मेकअप छ ।
भिडियोमा मुख्य सहायक छायांकारको रुपमा इश्वर सिन्केमान र हिमाल श्रेष्ठले काम गरेका छन् भने सहायक कोरियोेग्राफरको रुपमा निर्मल खत्री र दीपक सीकेले काम गरेको छन् । भिडियोका प्रोडक्शन डिजाइनर सुदिप ढकाल हुन् ।
केकी भन्छिन्ः प्रेम प्रस्ताव राख्ने युवकको लिस्ट लामै छ !
सास गन्हाउने समस्याबाट हैरान हुनुहुन्छ? यसो गर्नुहोस् !